Gawaarida gawaarida, yareeyaha wax lagu xirto, alaabada guban kara
F isbarbarbar isweydaarsi leh bir-ku-wareejinta mashiinka heeraarka ah (shiidi buuxda buuran, buuq yar)
Iyada oo leh godad Lateral tayo leh oo loogu talagaley dhinaca, waxaa jira naqshad loo habeeyay oo loo yaqaan 'Space-optimized design' iyo Compact xoog badan oo iskuxiran koronto, guryaha Unibox, Enatesced gearshaft compling, ama waxaad ku rakiban kartaa iskudarka Servomotor, Xaddiga Saamiga Wide (4 Stages) Atex - gearbox for Bey'adda qaraxu 2G / 2D.
Gawaarida isweydaarsiga leh ee isweydaarsiga leh ee isweydaarsiga leh waxay adeegsanayaan mabda'a naqshadeysan ee qaab dhismeedka unugyada, taas oo si weyn u yareynaysa noocyada qaybaha iyo kaydka, aadna u gaabiyey wareegga gaarsiinta. Sanduuqa bir ee bir-adageedka leh ee leh geesaha iyo gasaarka waxaa laga sameeyay bir tayo sare leh. Dusha sare waxaa ka adkaaday karbaashka iyo bakhtiinta. Qalabka shiidi waa la dhammeeyaa, faafinta waa xasilloon tahay, qaylada ayaa hooseysa, awoodda dhalidda ayaa weyn, heerkulka kor u kaca ayaa hooseeya, oo adeegga adeegga ayaa dheer.
0.50 rpm Offset Gear Motor for SALE. 1.5 rpm Offset Gear Motor for SALE. 3.4 rpm Offset Gear Motor for SALE. 4 rpm Offset Gear Motor for SALE. Mashiinkayaga istiraatiijiga ah ee qalabka 'Offset gear gear gear' waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha iftiinka, warshadaha kiimikada, qalabka dhismaha, mashiinnada quudinta, iwm. Iyadoo xulashada ballaaran ee Sogears ee xagal-xagal, matoorrada qalabka korontada ku shaqeeya iyo kuwa dheellitiran ay bixiyaan xulashada ugu fiican ee codsiga. -kabadbaday.
Noocyada isafgaradka ee mashiinka isku dhejiska ah ee lagu dhejiyo qalabka 'Offset gear motor s' iyo qalabka yareeya ayaa siiya waxtarka sare iyo isweydaarsiga noocyada kale ee hogaaminaya. Mashiinnadayada iskudhafan ee isbarbar yaacaya waxay adeegsadaan qalab wax ku ool ah. Waxay noqon karaan noocyo kala duwan oo xulashooyin ah sida bareegyada ama dhuujimaha. iyo wiish lagu rakibay mashiinka dhamaadka. Raadi adeegyo khaas ah oo loogu talagalay naqshadeynta mootada qalabka korontada laga soo saaro sogaar soosaarka iyo La shaqeeyso soo saarayaasha mootadayada si aan ugu dhisno matoor marsho dalabkaaga gaarka ah.
Nooca 'Sogears' A matoorrada gawaarka ayaa laga heli karaa cabirrada '19' oo leh meerrar kuxiran guluubyo guntin iyo garabka korantada iyo lugta ama qaabeynta dul-saaran. Dhamaan matoorrada 'gear' waa matoor birlaji joogto ah oo adeegsanaya sanduuqa wareega ee caadiga ah oo loogu dhinto guryaha lagu tuuro. Waxaa lagu bixin karaa isku darka matoorrada DC ama AC MOTORS. Kaliya doorashadaada.
1. Dib-u-habeeyayaasha taxanaha ah waxaa loo sameeyay si waafaqsan shuruudaha farsamada ee caalamiga ah waxayna leeyihiin maadooyin saynis iyo farsamo sare leh.
2, keydinta booska, la isku halleyn karo oo waarta, oo leh awood xad dhaaf ah, awood ilaa 90KW ama ka badan.
3. F taxanaha isdabajoogga ee jaangooyooyinka qalabka korontada lagu gooyo ayaa leh tamar yar, waxqabad ka sarreeya iyo waxtarka sare ee ka sarreeya 95%. Hawlgallada laba-geesoodka ah iyo awoodda lagu wajihi karo dhinac kasta waxay sameysmayaan 80 Frame. Gearmotors waa xulasho weyn oo loogu talagalay gaariga korontada, bamka, wiishka, daryeelka dabaqa.
4. Barbar-socod bar-bar-barad-haye ah wuxuu leeyahay gariir hoose, dhawaqa hoose iyo keyd tamarta sare. Waxay ka kooban tahay qalab tayo sare leh oo loo yaqaan '20CrMnTi' waxayna leedahay dusha sare ee 58-62HRC ka dib kariska iyo joojinta daaweynta kuleylka. Ka dib markii shiidi, saxanku wuxuu noqon karaa cawlan 5-6. Moodalka yutiilitida wuxuu leeyahay faa'iidooyinka saxda howsha sare, gudbinta deganaanshaha, mugga mugga yar iyo cimri dheer oo adeeg.
5, iyada oo loo marayo mashiinka saxda ah, si loo hubiyo isbarbar dhigga xargaha iyo saxnaanta meeleynta, dhammaantoodna waxay ka kooban yihiin kulanka gudbinta qalabka qalabka dib-u-habeynta waxaa ku qalabeysan noocyo kala duwan oo matoorro ah, sameynta isku-dhafnaan farsamo iyo koronto, si buuxda u dammaanad qaadaya astaamaha tayada isticmaalka matoorrada jeexan.
1 S: Waa maxay MOQ-gaaga gawaarida gear?
A: 1unit waa ok ok noocyo kala duwan.
2 S: Ka waran caymiskaaga gawaarida qalabka?
J: Hal sano. Waxaan ku siineynaa Konecranes Offset Geared Motors For Industrial at Rs 40000 / cutubka Pune, Maharashtra. Hadda ka hel qiimaha ugu fiican.
3 S: Ma bixisaa adeegga OEM oo leh astaan-macmiil?
A: Haa, waan samayn karnaa amarada OEM, laakiin waxaan inta badan diiradda saarnaa astaan ​​u gaar ah.
4 S: Ka waran shuruudaha bixintaada?
A: TT, midowga reer galbeedka iyo paypal. 100% bixinta horumarsan ee amarada ka yar $ 5,000. 30% dhigaalka iyo isku-dheelitirka kahor bixinta gudbinta amarada ka badan $ 5,000.
5 S: Ka waran kaydintaada?
A: Kartoon, kiis Filim. Hadaad ubaahantahay waxbadan, waxaan kuguxiran karnaa alaab dhan pallet
6 S: Macluumaad intee le'eg ayaa la siinayaa, haddii aan kaa iibsado matoor marsho ah?
A: Awoodda la qiimeeyay, saamiga boorsada, xawaaraha gelinta, booska kor u qaadida. Faahfaahin dheeraad ah, sifiican!
7 S: Sideed u gaarsiin kartaa qalabka gaaska?
A: Waan isbarbar dhigi doonaa oo dooranaa qaababka ugu habboon ee lagu gaarsiin karo badda, hawada ama dirista dirista.
Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysan doonto wadashaqeynta aad nagala sameynayso.
HT250 bir culus oo bir ah
Waxyaabaha xiisaha leh:
Meelaha dusha kore ee adag ee qalabka
Waxyaabaha guntinta galka / soosaarka
40Cr ama 42CrMo
Shaft at saliidaha adag adag postion
Saxeexa saxda ah ee shayga giyaarka
Saxsan oo ku shiidid 4-6 fasalka
Heer-beel, sibidhis, demin iwm
Lugaha ayaa lagu rakibay, flange lagu dhejiyay
Gelinta Flange, galinta gudaha, gelinta xargaha
NSK, SKF iwm
Calaamadaha sumadaha saliida
NAK, SKF iwm
Y taxanaha motor
40Cr ama 42CrMo, Tempering, sibidhka, dejinta iwm.
1. Wax soo saar isbarbar socda, qaab dhismeedka is haysta, Xuddunta gudbinta ballaaran, howlgalka xasilloon, buuqa yar iyo nolosha adeegga muddada dheer. Taxanaha F: Gawaarida Gawaarida Xaraashka ah ee Qaybta Heerkulka Howlgalka -60˚F illaa + 250˚F. AC Motor waxaa lagu qiimeeyaa 265˚F. Guri isku-dhafan
2, habka rakibida: rakibida saldhiga, rakibida faashad dabacsan, rakibida flange, rakibida gacanta torque, rakibida flange yar.
3, nooca aasaasiga ah ee gelitaanka labaad iyo jihada wareegga wax soo saarka waa isku mid, heerka saddexaad waa ka soo horjeed; Isku darka F / R markii la waydiiyo. Mashiinka qalabka 'Sogears offset gear motor' asal ahaan waa nooca 143: 1 ee qalabka kale ee jaangooyada. Haddii aad rabto waxoogaa xawaare ka badan waxa 143, waxaan ku siin doonnaa mid laguu qaabeeyey, kani waa mootada adiga loogu talagalay!
4. Qaabka wax soo saarka: soosaarka godad godan ama soo saarida usheeda dhexe adag. Waqti dheer injineernimada waxay naqshadeysaa oo soo saartaa xariiq buuxa oo mashiinka mashiinka isbarbar socda ah, Oo loo adeegsado codsiyada qalabka fidinta cuntada, qalabka hosit qalabka, iyo wixii la mid ah.
5. Waxqabadka dhexdhexaadka ah: 96% heerka labaad, 94% heerka saddexaad, iyo 85% loogu talagalay taxanaha F tax / R.
Xaddiga saamiga xawaaraha: Nooca aasaasiga ah ee 3.81 ~ 281.71, Nooca isku darka F / R wuxuu gaari karaa 31434
Xaddiga Torque: 200 ～ 18000 Nm
Awoodda awoodda: 0.18 ~ 200 kW, oo leh bg matoor maareyn koronto laakiin waxay ku socotaa ugu yaraan laba jeer xawaaraha. Way ku fiican tahay aaladaha u baahan xawaaraha xawliga!
nooca dhismeedka: Nooca fidinta F-shaft, nooca FF-shaft dheereynta nooca, isku xirka flange, FS- waxay muujineysaa isku xirka galida FA-ga kuxiran, FF-shaft dhajiyay, flange saaran
Moodooyinka ugu waaweyn ee taxanaha isugeynta shaati isugeynta xarkaha hepatical waa:
Ku saabsan Sogears Hadafinta
TAARIIKHDA: Sogears waa sumad farsamo oo ah Yantai Bonway Manufcaturer Co., Ltd. oo in ka badan 10 sano '
khibradaha wax soo saarka farsamada, Sogears had iyo jeer si adag u taagan on the
mabda'a ugu qanacsanaanta macaamiisha.
TAYO: Baadhitaanka agabka, Kontroolka Waxsoosaarka, Tijaabada Alaabada La Soo Gabagabeeyay, Kormeerka Ka Horeeya
HAWLGALKA: “Mar iyo weligiis” waa yoolkeenna ah inaan u adeegno macaamiisha adduunka. Mar haddii aan sidaas yeelno
ganacsiga macaamiisha, waxaan samayn doonnaa ganacsi waligiis.
MARKET: 30 dalal kala duwan, gaar ahaan Jarmalka, Austria, Japan, USA iyo Bariga-Dhexe.
TAARIIKHDA: 100% waqtigii gaarsiinta ayaa la hubo.
ADEEGYADA: Jawaab deg deg ah oo ku qoran luuqadaha Ingiriiska, Jarmalka, Jabaan iyo Shiinaha.
OEM: Amarada gaarka loo leeyahay ayaa lagu soo dhaweynayaa Sogears.